Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in Samsung
Tageen maalmahaan marka telefoonada Nokia in ay telefoonka mobile keentay in suuqa loo isticmaalo. Waxaa si degdeg ah bedelay casriga ah la siiyo astaamaha dheeraad ah oo heer sare ah iyo sidoo kale ay size. Xaqiiqdu waxay sidoo kale in Nokia ayaa dhawaan u wareegay habka hawlgalka ay ku Windows ayaa sii kordheysa eryay off macaamiisheeda daacad. Iyadoo phone Samsung a haan xiriirada wareejiyo gacanta ka Nokia ah, liiska xiriirada caddaynaysaa in la daalin iyo wakhtiga oo dhan ka baabbi'iya kor ku xusan. Waxa ugu wanaagsan waa ay jiraan laba qof oo ah qalab xirfad qorsheeyay in uu caawiyo hannaanka looga dhigo mid fudud oo qaladaad yar lagu sameeyey.
Isticmaal Nokia OVI Suite si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in Samsung
Xiriirada Transfer ee hal guji la Wondershare MobileTrans
1. Isticmaal Nokia OVI Suite si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in Samsung
Si aad u gudbiyaan xiriir telefoonka gacanta ee Nokia in Samsung, waxaad dooran kartaa habka lacag la'aan ah. Shirkadda Samsung ayaa ay app Switch Samsung oo kaa caawin kara inaad si ay u gudbiyaan iyo gurmad aad sawiro, xiriirada, farriimo fudayd. Tani waxa keliya macquul ah hadii telefoonka Nokia leeyahay Nokia OVI Suite. Labada barnaamijyadooda lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah internetka. Halkan waa nidaamka:
Talaabada 1: dajinta Suite Nokia OVI
Tag Support Nokia ah Site iyo raadiyo link download of OVI Nokia ah Suite ah. Dooro fursad u download iyo rakibi app.
Talaabada 2 : Doorashada maxay si ay u gudbiyaan
Bilow app iyo fiiri qaybta ku qoran "Tools". Ka dib waxaa gujinaya, tag "Xulashada" qayb iyo dooran "Xiriirada."
Next, u tag "Microsoft Outlook Express" waafajinta xiriirada iyo riix OK.
Talaabada 3 : beddelashada xiriir dhex Microsoft Outlook Express in Switch Samsung ee App
Ka dib markii howlan xogta si Microsoft Outlook Express, ordo Switch Samsung ee App si ay u helaan xiriirada ka Utility Muuqaalka ah. Connect ah qalab Samsung Android in computer si ay u dhammaystiraan geedi socodka kala iibsiga.
Si kastaba ha ahaatee, habka lacag la'aan ah taas oo ah suuqa kala iibsiga u muuqataa in ay adag yara, siin xaqiiqada ah in laga yaabaa in aad wali u leeyihiin in ay abuuraan ah account Microsoft Outlook Express oo soo maraan dhammaan geedi socodka xaqiijinta. Marka la eego in aad leedahay si aad download labada barnaamijyadooda ka dibna u soo dajiyo iyo raacaan qaar ka mid ah hage ku habboon si ay u gudbiyaan xiriirada, waqti badan oo qaali ah waxaa laga yaabaa in la maal-waxa si kale noqon kartaa habka fudud. Taasi waa sababta xirfadlayaasha ay la timaado software fiican oo user-friendly ah si loo badbaadiyo xaaladaha.
2. xiriirada Transfer ee hal guji la Wondershare MobileTrans
Iyadoo horumarinta ee technology, shaqsiyaadka uu lacag ugu casriga dhawaan la rajada helitaanka mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee la. Runta waxa ay tahay waxaa ka mid ah dhow dahay aad adeegi kartaan ugu fiican haddii aad u kordhiyo karo kara. Wixii kala iibsiga deg deg ah, ammaan oo hufan ee xiriirada ka shaqeynayaan, Wondershare MobileTrans aad bixisaa wax aan ka yarayn adeeg tayo leh.
MobileTrans Kuu ogolaanaya in aad xiriir ma aha oo kaliya laakiin sidoo kale farriimaha, waraaqaha, sawiro, app, music, jadwalka iyo videos wareejiyo ka hore telefoonka gacanta si newbie ah. Iyada oo xidhiidh la leh macluumaad dheeraad ah sida magaca shirkada, jagada shaqada, iyo cinwaanka email, qalab this si toos ah nuqul doonaa iyaga paste.
Software Codsigan taageertaa tiro badan oo ah noocyada telefoonka mobile loo eegin nooca network. Iyadoo Wondershare MobileTrans dhow dahay, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad ka wel ku saabsan sida ay u gudbiyaan xiriirrada gacanta iyo waqtiga qaaday in sidaas samaynaya.
Sidee si ay u gudbiyaan waxyaabaha phone Symbian in Samsung oo isticmaalaya MobileTrans
Step1 . Orod MobileTrans kombuutarka
Marka hore dejisan iyo rakibi Mobiletrans Wondershare on your computer. On uu furmo suuqa ugu horeysay oo laga furay, dooran Phone in Transfer Phone hab.
Step2 . Connect Phones ka
Next, labada telefoonada xiran PC ka via fiilooyinka USB. Waxay qaadan kartaa dhowr ilbiriqsi ee telefoonada ah in la aqoonsado. Ka dib markii ay telefoonada ku ayaa soo qabanqaabinayay, waxaad riixi kartaa batoonka Flip dusheeda inay beddelaan qalabka isha iyo qalab bartilmaameed.
Step3 . Dooro Xiriirada oo guji "Start Copy"
Dhammaan noocyada kala duwan ee files in loo gudbin karaa in la soo bandhigi doonaa shaashadda. Dooro xiriirada oo guji " Start Copy "iyo hannaanka kala iibsiga isla markiiba bilaabo. Waxyaabaha lagu wareejiyay waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kuwa taas oo ay si buuxda wareejiyo waxaa la qorayaa sida Success . Ogsoonow in, haddii aad barkinta mid ka mid ah telefoonada, halka habka wareejinta ayaa ka socda, habka la kala gooyey oo laga yaabaa in aadan awoodin in ay dib u helaan xogta oo dhan. Kadib markii geedi socodka dhamaato, riix OK button si loo soo afjaro nidaamka.
Sida loo waxyaabaha ka Nokia Windows Phone wareejiyo qalab Samsung la MobileTrans
Si aad u gudbiyaan xiriirada ka phone Window Nokia in Samsung oo isticmaalaya MobileTrans ma ahan nidaam toos ah MobileTrans sababtoo ah ma si toos ah ka akhriyi kartaa xiriirada phone Windows. Marka hore waxaa lagaaga baahan doonaa in gurmad xiriirada si aad u One Drive. Ugu dambayn, ku celin doonaa taleefanka Samsung. Halkan waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo si ay u oggolaadaan in ay telefoonka kala iibsiga telefoonka ee xiriirada
Tallaabada 1 : kaabta in Mid ka mid ah Drive
Talaabada 2: Tag Settings
Tallaabada 2 . Celinta ka Mid Drive in qalab Samsung
Marka habka gurmad la soo gabagabeeyo, aad haatan soo celin kartaa xiriirro si ay qalab Samsung ah. Tani waxaa si fudud u samayn doorataa Soo Celinta ka gurmad ka dibna doorasho OneDrvie ka screen pop-up ah. Gudaha gal si aad One account Drive iyo Xiriirada la dooran doona default ka mid ah liiska. Riix Start Transfer .
Geedi socodka oo dhan waa wax fudud oo waa kaliya oo wax ku daqiiqadood ka hor inta aad qabto oo dhan xiriirada iyo xogta wareejiyo phone kale. Ha qaadan wadada dheer in aad nuqulka xiriir si aad u Android oo keliya, maxaa yeelay, aad isticmaalayso telefoonka Windows ah.
> Resource > Transfer > xiriir Transfer ka Nokia in Samsung